Phase3- Year R (Reception Year)/ Year 1 (Age5to6yrs old) UK Phonic Teaching - Myanmar Network
Posted by Freddy on August 14, 2015 at 16:29 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Phase3ß Year R (Reception Year)/ Year 1 (Age5to6yrs old)
Following letter တွေ က Phase3မှာလေ့လာရမယ့် letter တွေ ပါ။ Phase2letter တွေနဲ့လည်းတွဲပြီး လေ့ကျင့်ပါ။
အပေါ်က letter တွေ Phonic အသံထွက်ရပြီဆိုရင် အသုံးများတဲ့ following words တွေ Decode လုပ်ပြီးဖတ်ခိုင်းပါ။
End of Phase3မှာတော့ Phase2and phase3letters တွေ ကို Phonic နဲ့အသံထွက် တတ်ရမည်။ Tricky words he, she, we, me, be, was, my, you, her, they,all, are တွေ ကို မှတ်မိပြီးဖတ်နိုင်ရပါမည်။ Phase 1 tricky words the, to, I, no, go တွေ ကို spell နိုင်ရပါမည်။
Example Practise လုပ်ရန် မိမိက m -a– n ကို Phonic နဲ့အသံထွက် ပြရင် ကလေးက (man) မန်း ဆိုတဲ့ combine လုပ်လိုက်တဲ့အသံထွက် နိုင်ရပါမည်။ အပြန်အလှန်ပါဘဲ မိမိက combine sound '(Jam) ဂျမ်' လို့ပြောရင် ကလေးက J-a-m ဆိုပြီး Phonic အသံထွက်နဲ့ ထွက်နိုင်ရပါမည်။ following words တွေနဲ့ Practise လုပ်ပါ။
. m -a– n ‘
. s - o - ck
. c - u - p
. p -e- g
.f- i - sh
. h -a- n - d
. t -e- n - t
.f- l -a- g
. s - p - oo - n
. s - t -a- m - p
Phase3Phonics Assessment.doc, 46 KB
P3 practice.ppt, 123 KB
Permalink Reply by Ma Mahello on August 15, 2015 at 12:41
16th conference form?